Fijoroana vavolombelona momba ny herisetra: Mpizahatany iray any Chile no nitantara ny tantarany
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fijoroana vavolombelona momba ny herisetra: Mpizahatany iray any Chile no nitantara ny tantarany
Chili dia nalain'ny fihetsiketsehana. Puerto Montt sy Santiago dia tanàna milamina any Silia matetika. Noho ny fihetsiketsehana goavambe dia lasa ivon'ny korontana miaraka amin'ireo tanàna hafa any amin'ny faritra sisa izy ireo. Nidina an-dalambe ireo olom-pirenen'i Silia manerana ny firenena mba hanohitra ny governemanta.
Puerto Montt dia tanàna misy seranana ao amin'ny distrikan'i Lake atsimon'i Chile, fantatra amin'ny maha vavahady mankany amin'ny tendrombohitra Andes sy ny fjords Patagonian. Ohatra iray amin'ny fielezan'ny hetsi-panoherana manerana ny firenena toy ny doro tanety avy amin'ny tanàn-dehibem-paritany ka hatrany amin'ny renivohi-pirenena ary tanàna lehibe indrindra, Santiago.
Fihetsiketsehana iray tapitrisa
Ny zoma 25 oktobra dia nisy mpanao fihetsiketsehana iray tapitrisa nirohotra nankany Santiago mba hanao fihetsiketsehana. Iray tapitrisa avy amin'ny firenena misy 17 tapitrisa. Hoy i @sahouraxo tao amin'ny twitter: Olona iray tapitrisa mandeha an-dalambe no tsy mora amin'ny mpampahalala vaovao tandrefana rehefa manohitra ny fitondrana maloto, tohanan'i Etazonia.
Nandehandeha tany Chile tamin'ny tetikasan'ny Masoivoho Alemanina, mpanoratra iray te-hijanona tsy fantatra anarana, nampitaha ny zavatra hitany fa mitranga any Chile amin'ny zava-mitranga any amin'ny kianja filalaovam-baolina any Alemana rehefa olona 20,000 100 no tonga nijery ary XNUMX no lasa mahery setra.
Ny rivotra iainana ankehitriny ihany any Chile. Vahoaka marobe no mivadika ho fihetsiketsehana ara-dalàna momba ny fanavaozana ara-tsosialy ilaina, saingy ireo vahoaka ireo dia mamadika ny firenena ho lasa faritra ady, manimba ny fizahan-tany ary mampidi-doza ny fiarovana ny olona.
Ny Filoham-pirenena safertourism.com, Dr. Peter Tarlow, dia nandany fotoana be tao Silia. Nidera ny firenena ho mahay mandamina sy maoderina izy. Raha jerena ny zava-misy ankehitriny dia nilaza i Dr. Tarlow fa mila tari-dalana ny firenena mandritra izao fotoan-tsarotra izao. Niasa nandritra ny 2 taona mahery tamina trano fandraisam-bahiny, tanàna sy firenena miompana amin'ny fizahan-tany izy, ary na ny mpitandro ny filaminana ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina ary ny polisy eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fizahantany.
Nanomboka ny fihetsiketsehana taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny metro 0.04 $ - teboka iray nampirongatra ny fihetsiketsehana marobe izay nanomboka ny 18 Oktobra ary mitombo isan'andro.
Tamin'ny andro fiakaran'ny vidim-piainana, nangataka ny hisorohana lavitra ny saran-dalana amin'ny tambajotra sosialy ny mpianatra ao Santiago amin'ny alàlan'ny tenifototra #EvasionMasiva. Ireo fihetsiketsehana dia nitarika fandrobana tao amin'ny magazay lehibe, fanakorontanana teny amin'ny arabe, ary fanilo ho an'ny gara miisa 22.
Nisolo ny kabinetrany ny filoham-pirenena shiliana Sebastian Pinera ny alatsinainy teo taorian'ny fihetsiketsehana mahery vaika ary niantso vonjy maika. Nalefa an-dalambe ny miaramila, ary nanomboka ny ora tsy hitsaharany.
Ny habetsaky ny fihetsiketsehana dia nitombo noho ny fitomboan'ny fahasosoran'ny olom-pirenena noho ny tsy fitoviana ara-toekarena, ny vidim-piainana, ny fisondrotan-trosa, ny fisotroan-dronono mampidi-doza, ny asam-panjakana ratsy ary ny kolikoly.
Farafahakeliny 20 no maty noho ny fihetsiketsehana.
Mampisondrotra ny zon'ny mpandeha an'habakabaka ny didim-pitsarana vaovaon'ny fitsarana eropeana vaovao
Ny Seychelles Sustainable fizahan-tany maharitra dia miara-miasa amin'ny fampielezan-kevitra Pristine Seychelles